Erbil, ayaa sidoo kale qeexay Arbil ama Irbil, oo loo yaqaan 'Hawler' oo ka tirsan dadka Kurdida ah (Kurdida: Af-Soomaali, Arbīl, Syriac: ܐܲܪܒܝܠ, Arbela), waa caasimadda Ciraaq iyo Ciraaq oo ah magaalada ugu weyn ee waqooyiga Ciraaq . Waxay ku taal ku dhawaad ​​350 kilomitir (220 mayl) Waqooyiga Ciraaq. Waxay leedahay qiyaastii 850,000 qof, iyo guddoomiyuhuna wuxuu lahaa dad joogto ah oo ah 2,009,367 ilaa 2015.
Heshiiska aadanaha ee Erbil ayaa loo celin karaa ilaa 5000 BC, waana mid ka mid ah meelaha ugu da 'weyn ee dunida ku nool. Xuduudda magaalada waa Citadel ee reer Arbil. Taariiqda taariikhda ugu horaysa ee gobolka ayaa taariikhdeedu ku beegantahay xeryaha Ur Ur III ee Sumer, markii King Shulgi uu xustay magaalada Urbilum. Magaalada ayaa markii dambe ay degganaayeen Assyriyaanka.
Erbil wuxuu noqday qayb muhiim ah oo ka mid ah Boqortooyada Asal ahaan ugu yaraan qarnigii 21aad ee BC ilaa dhamaadkii qarnigii 7aad ee BC, ka dib markii ay qabsadeen Gutiyiin, waxaana loo yaqaan 'Assyrian annallions' sida kala duwan sida Urbilim, Arbela iyo Arba- Ilu. Dabadeedna, waxay ahayd qayb ka mid ah gobolka juqraafiga ah ee Assiriya, oo ka kooban dhowr boqortooyo, oo ay ku jiraan Boqortooyada Midowgga, Boqortooyada Achaemenid (Axsiisidii Assyria), Boqortooyada Makedoniya, Seleucid Suuriya, Parthian Empire (Athura), Asuriya (Rooma Roman) iyo Boqortooyada Sassanid (Assuristan), iyo sidoo kale noqoshada caasimadda gobolka Neo-Assyrian ee Adiabene intii u dhaxaysay bartamihii qarnigii 2aad iyo horrantii 2aad AD. Ka dib markii ay qabsadeen Carabta oo reer Faaris ah, Assiria oo ah urur siyaasadeed oo ka soo jeeda (markaas loo yaqaan Assuristan / Athura) si tartiib ah ayuu u kala daashaday, xilliyadii dhexe ee magaalada waxa u yimid xukunka Seljuk iyo Turkiga.
Matxafka qadiimiga ah ee Erbil waxa uu ku yaalaa ururo waaweyn oo ka soo horjeeda Islaamka (gaar ahaan Sumerian iyo Assyriyiin) waana xarun mashaariicda qadiimiga ah ee degaanka. Magaaladan waxaa loo qoondeeyey Jaamacadda Carabta ee Carbeed 2014 oo ay soo saartay Golaha Carabta ee Dalxiiska. Bishii Luulyo 2014, Erbil Citadel waxaa lagu qeexay inuu yahay Xarunta Dhaxalka Aduunka ee UNESCO.
Magaaladu waxay leedahay qowmiyado kala duwan oo reer Kurdid ah, Assyrians, Carab, Ermeniya, Ciraaq, Turkiga, Yezidis, Shabakis iyo Mandhees. Islaamku wuxuu si siman u kala duwan yahay, rumaystayaasha Sunniga Islaamka, Shiicada Islaamka, Kiristaanka (badanaa waxaa raacay Assyrians iyo Ermeniya), Yezidis, Yarsan, Shabakism iyo Mandheera waxay ku nool yihiin gudaha iyo hareeraha Erbil. Naadi carbeed oo ka mid ah Arbil waxaa ka mid ah: Ciriiriga Ciraaq, taariikhda hore, gogosha bini-aadmiga, khafiifinta Hulaku iyo muraayadda qurxinta Qur'aanka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Erbil&oldid=219543"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Oktoobar 2021, marka ee eheed 10:29.